Kuza kubiza malini ukufunda kwisikolo sezonyango eCaribbean? 2022
Septemba 7, 2021 U-Okpara Francis
Kuza kubiza malini ukufunda kwisikolo sezonyango eCaribbean?
Yenziwe zii-700 zeziqithi, iziqithana, iingqaqa zekorale kunye neecays, ummandla weCaribbean waziwa njengeziqithi. ICaribbean ijikelezwe luLwandle lweCaribbean kunye nakuMntla weAtlantic Ocean. Ngamanye amaxesha kubizwa ngokuba yiWest Indies, isiqithi sidume ngokwahluka kwezoqoqosho, amathuba okukhula, kunye nezikolo zonyango.
Izikolo zonyango zeCaribbean zihlala zifumana ukuthandwa phakathi kwabafuna ukuba ngoogqirha. Into enomdla kukuba Iindleko zezikolo zaseCaribbean zonyango ziyafikeleleka kwaye uthembisa imbuyekezo engcono kutyalo-mali.
Nangona iUnited States lukhetho lokuqala lwabaninzi abanqwenela ukufumana imfundo yezonyango. Kodwa izifundo kunye nemirhumo kwizikolo zonyango zaseMelika okanye zaseCanada zinyanzela abafundi abaninzi ukuba banikezele ngamaphupha abo.
NgokukaMbutho weeKholeji zaseMelika zoNyango (AAMC), iindleko zonyaka zokuya kwisikolo sikarhulumente sezonyango zijikeleze i-US $ 37,556 e-US Kwelinye icala, abafundi bezonyango base-US bachitha umndilili we-US $ 60,000 ukuya kwiikholeji zonyango zabucala okanye kwiiyunivesithi.
Xa kuthelekiswa ne-US okanye iikholeji zonyango zaseCanada, umsebenzi wezonyango kwiCaribbean ubiza kakhulu kubo bonke abafundi abanomdla wokulandela amayeza.
Namhlanje, siya kukubonelela ngeenkcukacha zokufunda kunye neefizi kwizikolo zonyango oluphezulu zeCaribbean. Makhe sithethe ngeenkcukacha zomrhumo, uncedo lwezemali, kunye nezifundo ngokweenkcukacha.
Ukuqonda kwiindleko zonyango lwesikolo seCaribbean
Oku kunokukothusa, kodwa izikolo zonyango kwiCaribbean Island zilungile ngokwexabiso. Abafundi bezonyango baseCaribbean kufuneka bangenise izifundo kunye neefizi kwisemester.
Abafundi bebanga leshumi ababhalise okanye ngaphambi kwenyanga kaMeyi ka-2021 kuyakufuneka bachithe i-US $ 17,325 yezifundo kwisemester nganye kwiiSayensi zeSiseko kunye ne-US $ 22,150 yezifundo kwisemester nganye yezeNzululwazi zeKlinikhi. Ngokwahlukileyo, abafundi bebanga leshumi ababhalise okanye emva kwesemester ka-Septemba 2021 kuya kufuneka bahlawule i-US $ 19,950 yokufunda kwisemester nganye yeeSayensi eziSisiseko kunye ne-US $ 24,350 yokufunda kwisemester nganye yezeNzululwazi zeKlinikhi.
Ngaphandle koku, abafundi bezonyango baseCaribbean bayacelwa ukuba bachithe kwimirhumo eyahlukeneyo, kubandakanya i-inshurensi yokungasebenzi, i-inshurensi yezempilo, isicelo esibhaliweyo, incwadi yesalathiso, umrhumo webhodi yelizwe, umrhumo wokuthweswa isidanga, umrhumo wokutshekisha imvelaphi, umrhumo wetekhnoloji yolwazi, kunye nomrhumo womsitho wengubo emhlophe okanye Imali yolawulo.
Amaxabiso ahlukeneyo aquka ezinye iimali ezibuyiswayo. Ngokukodwa, izifundo kunye neendleko ezongeziweyo ziya kutshintshwa, kwaye izikolo zonyango ziligcinile eli lungelo.
Hlola uncedo lwezemali kunye neengxowa-mali
Akuyomfihlo ukuba isidanga sobugqirha yenye yeenkqubo zemfundo ephakamileyo ezibiza kakhulu. Izithintelo zemali zihlala zithintela abanomdla kwezonyango ekufumaneni imfundo yezonyango kwaye babe ngoogqirha abaphumeleleyo.
Ke ngoko, izikolo zonyango ezivunyiweyo zeCaribbean zibonelela ngoncedo lwezezimali kunye nezifundo ezininzi zokunceda abafundi ukuba bazalisekise iphupha labo. I-US Academic Scholarship, iNkqubo yaseCanada yeScholarship, iCayman Islands Scholarship, kunye neJha Family Scholarship zezinye zeenkqubo eziphambili zokufunda kwabafundi abafanelekayo kwizikolo zonyango kwiCaribbean.
Ke, phonononga kakuhle malunga neekholeji zenqanaba eliphezulu kunye neeyunivesithi ezikwiiCaribbean Islands ukuze uthathe isigqibo esifanelekileyo career. Kuya kufuneka uqaphele ukuba izikolo zonyango zaseCaribbean zinabafundi abamkelekileyo. Ke, bhalisela inkqubo kwangoko!
Post Previous:Ixabiso nokubaluleka kweeSayensi eziSisiseko
Okulandelayo Post:Ungaba njani nguNjingalwazi weKholeji yoLuntu